विश्लेषक भन्छन् -अझै चार पाँच महिना बढ्दैन सेयर बजार ! - Dainikee News::Fastest news portal nepal, news from nepal
विश्लेषक भन्छन् -अझै चार पाँच महिना बढ्दैन सेयर बजार !
लगातार सेयर बजार घटेपछि यसबारेमा अनेक खालका टिप्पणी हुन थालेका छन् । कतिपयले अर्थमन्त्रीको बोलीका कारण सेयर बजारमा प्रभाव परेको आरोप पनि लगाएका छन् । खासमा बाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने चुनावी नतिजा आएपछि बजार घट्न थालेको थियो त्यो क्रम नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि पनि जारी रह्यो । के छ बजार घट्नुका कारण ?
महत्वपूर्ण लागेको हामीले यो सामग्री सेतोपाटीबाट साभार गरेका हौं । सम्पादक
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन २५, २०७४ /Friday, March 9th, 2018, 9:18 pm